Iyo chaiyo yekugadzirira kugadzirira kutamba padhaya tenesi | Bezzia
Pau Heidemeyer | 01/05/2021 18:00 | Yakagadziridzwa ku 30/04/2021 11:56 | Exercise, Utano
Kana tave nechido chitsva chemutambo, gadziriro yemuviri yemutambo uyu yakakosha, kungave kuri kuita kana kuda kuusimudzira zvine hunyanzvi. Isu tinoziva kuti vatambi vehunyanzvi vane maawa mazhinji ekudzidzira uye kugadzirira kwemuviri kumashure kwavo. Kugadzirira kwemuviri padanho tenesi kunodiwa iva vatambi vari nani uye uve nemitambo iri nani, Izvi zvinoita kuti zvinakidze uye iwe unogona kuwedzera hunyanzvi hwako neracket uye nemunda.
Kana iwe uchida kuve mutambi ari nani, uchafanirwa kuve nemhando chaiyo yekugadzirira muviri kuti ikubatsire kuve nemitambo iri nani mune ramangwana. Kana iwe ukavandudza, iwe unosvika mabhora nekukurumidza, inokupa iwe yakawanda nguva yekuita kurohwa kuri nani uye nehunyanzvi nzira, pasina kunaya uye kugona kuona kwaunoda kunongedza bhora usati warova.
Zvagara zvichitaurwa kuti iyo «Paddle inotambwa nemakumbo» Uye chirevo ichi ichokwadi chaizvo, nekuti kana makumbo ako akasapindura, kunyangwe uri kugona sei kurova mabhora, haufe wakasvika pavari.
1 Rudzi rwekugadzirira muviri iwe unofanirwa kutamba padhaya tenesi
1.1 Iwe unofanirwa kudzivirira kukuvara
1.2 Zvigadzirire panyama nepfungwa
2 Maekisesaizi ekugadzirira kwako kwemuviri
2.1 Kubatsirwa kwemuviri uri nani mupadhezi tenesi
2.2 Aya ndiwo maitiro aunofanirwa kudzidzisa kutsungirira
2.3 Aya ndiwo maitiro aunofanirwa kudzidzisa simba
Rudzi rwekugadzirira muviri iwe unofanirwa kutamba padhaya tenesi
Kuti uve nemutambo uri nani, unofanirwa kuita akateedzana maitiro anokutendera kuti uvandudze. Izvo hazvina kukodzera kuita zvakajairwa zvekurovedza muviri maitiro, neiyo tsika idiki yakagadziridzwa, uye inogona kutoita kuti ive inokuvadza mukusimudzira kwedu. Iwe unofanirwa kudzidzisa simba, kutsungirira, kumhanyisa uye kuchinjika, uye kune aya mamwe marudzi emitambo yekudzidzira inofanirwa kuitwa. Zvakare, iwe unoda mhando mbiri dzakasiyana dzekugadzirira kuti ugone kuvhara nzvimbo dzese.
Iwe unofanirwa kudzivirira kukuvara
Chimwe chikonzero nei tichifanira kupa chikamu chenguva yedu kugadzirira kwemuviri kudzivirira kukuvara. Nekuti sezvazvinogara zvichinzi: "Kudzivirira kuri nani pane kurapwa". Zvakawanda zvekukuvara kunoitika mumunda weamateur zvinokonzerwa nemuviri zvinogona kusashandiswa kune iko kufamba. Saka, Iwe unofanirwa kuisa mari mumaawa ekudzivirira kuti uzviponese iwe mune ramangwana kukuvara.
Zvigadzirire panyama nepfungwa
Chekupedzisira, kurovedza muviri kunokanganisa pfungwa dzako, kuumba simba repfungwa rinotibvumira kusangana nemamiriro ekumanikidza mukati memitambo. Munguva dzakakosha, zvinobatsira kuita sarudzo dzakanaka, nekuti kana makumbo edu akanaka, zvirokwazvo pfungwa dzedu dzakajeka, pachinzvimbo, makumbo anorema uye akaneta, kusagadzikana mugokora uye nemoyo wekumhanya, pfungwa dzedu dzinenge dzakaipa uye dzakavharwa.
Maekisesaizi ekugadzirira kwako kwemuviri
Kana iwe uri mutambi wepadel uye uchida kunatsiridza nhanho yako yekutamba, iwe unofanirwa kuisa kukoshesa pabasa rehunyanzvi uye kugadzira chirongwa chesimba. Saka, Tinoda kukuudza zvaunofanira kutarisa kuti uvandudze mune izvi zvinhu.
Tevere, ndiri kuzofumura zvimwe zvezviitwa zvakakosha zvausingakwanise kupotsa mukugadzirira muviri wako.
Kubatsirwa kwemuviri uri nani mupadhezi tenesi
Tisati tataura nezve mawaniro atingaita kuwedzera kutsungirira uye simba, tinoda kuratidza zvakanakira kuve muhutano hwakanaka. Nemitambo yekurovedza muviri unowana mabhenefiti anotevera:
Vamwe dzimwe nzvimbo dzinoputika ivo vachakubatsira iwe kusvika kumabhora nekukurumidza.
Nekufambisa yakasimba, yakadzikama zvakanyanya ichatibvumidza gwara riri nani uye nekurova simba.
Kuramba kukuru panguva yemitambo. Mutambo wepadel urikuda, kuneta kwepfungwa kunosangana nekuneta kwemuviri, kana isu tichikwanisa kunzvenga iyo yekupedzisira, isu tichava vakasimba kupfuura vakwikwidzi.
Wedzera simba mushamhu. Kuve nesimba rakakura mumatatu ekumusoro kunotibvumidza isu kuva nesimba rakawanda mukurova, zvichiita kuti tihwine mapoinzi akawanda.
Zvirinani kurova simba zvinochengetwa panguva yemutambo.
Iwe unosvika kune mamwe mabhora. Kana iwe ukarovedza muviri wezasi, ndiko kuti, makumbo, iwe unogona nyore kufambisa makumbo ako uye kusvika kumabhora, iwe unenge uchikurumidza uye nekukasira kuti ugone kurova uye kuhwina poindi.
Aya ndiwo maitiro aunofanirwa kudzidzisa kutsungirira
Kuti udzidzise kuramba unofanirwa kusiyanisa nzira mbiri dzekudzidzisa, iyo yechinyakare kuramba nzira uye iyo HIIT nzira.
Maitiro echinyakare akavakirwa pakuita zvikamu zvakareba zvemaminetsi makumi mana nemashanu ezviitwa zveeerobic sekuenda kumhanya, kumhanyisa pachitsiko, kushambira, kuchovha bhasikoro, nezvimwe. Iyi nzira ichatibvumidza isu, kune rumwe rutivi, kupisa macalorie uye nekudaro kubatsira kuve nekarori kushomeka iyo inotibvumidza isu kudzikisa huremu uye kudzikisa mafutaZvakare, izvo zvinokubatsira kunatsiridza kugona kwemapapu, zvichaita kuti isu tiwedzere kupokana mumutambo.
Iyo nzira yeHIIT yakavakirwa pakuvhenganisa zvakadzama zvikamu nezvikamu zvekuzorora. Semuyenzaniso, Workout yeHIIT ichave yekuita zvikamu gumi zvemasekondi makumi matatu uchimhanya nekumhanyisa kumhanya, uye miniti yekudzoka. Izvi zvinoita kuti hunyanzvi hwedu padhodhi huve nani kuwedzera kusagadzikana kwedu panguva yemutambo, nekuti isu tinogara tichisanganisa hunyanzvi nemaprint kuti tisvike kumabhora.
Aya ndiwo maitiro aunofanirwa kudzidzisa simba
Kune rimwe divi, kuti uwedzere simba mupaddle unofanira kusarudza zvimwe mizhinji-yekubatanidza kurovedza ine zviyero zvakasiyana. Tinogona kuita zviitwa izvi mune yekurovedza muviri kana chero kupi kana isu tiine zvakakosha zvinhu.
Iwo maekisesaizi aunofanira kutarisisa kune akawanda ndeaya:
Squats: Iyi ndiyo quintessential gumbo kurovedza muviri. Kushanda squats kunotibvumidza isu kusimbisa ese epasi mhasuru nekusimbisa kwakanyanya pane gluteus uye quadriceps. Ukatarisa vatambi vane hunyanzvi, vanotamba mutambo wese munzvimbo yekutsvanzvadzira, kufamba kumwe chete kwatinoita patinenge tichikwenya.
Bench wokudhinda: kufamba uku kunobatsira chipfuva chedu kuita maekisesaizi, iko iko iko kusundidzira iko iko kwakawanda mhasuru dzakabatanidzwa. Iyo pectoral, yepamberi fudzi uye triceps anoshanda. Iyi mhasuru nhatu dzakakosha kwazvo patinoita mhando dzese dzekurohwa.
Triceps kurovedza: kuita triceps kurovedza muviri senge yakavharwa muchina, kana iyo triceps kurovedza ine pulley, inobvumidza iwe kuti ushande iyo mhasuru iyo yakakosha zvakanyanya kune paddle tenesi.
Kana iwe uchida kunatsiridza hunyanzvi hwako, chengeta aya matipi uye kurovedza mupfungwa kuti mutambo wako unotevera uve mutambo wakanakisa wawakambotamba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Exercise » Iyo chaiyo yekugadzirira kugadzirira kutamba padhaya tenesi
5 mamaki ekugadzira kuratidza ganda rako muchirimo